पासपोर्ट बनाउनेको भिड, पिसाब फेर्न जाँदा पालो मिचिने डर ! – Krazy NepaL
November 2, 2021 183
१४ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौंमा राहदानी (पासपोर्ट) बनाउनेहरुको लामो लाइन लागेको छ ।राहदानी विभाग अगाडिको लाइन उत्तर ढोकासम्म पुगेर घुमेको छ । विदेश जाने प्रयोजनका लागि पासपोर्ट बनाउने गरिन्छ । पासपोर्ट बनाउने लाइनमा युवा–युवतीहरु बढी देखिन्छन् ।
छिटो पालो पाइने आशाले चार बजे बिहानैदेखि लाइनमा बसेको एकजना सेवाग्राहीले बताए । ‘बिहान चार बजे लाइन बसेको बल्ल पालो आयो,’ उनले भने ।उनले भने, एकछिन लाइन छोड्दा पालो मिचिन्छ भन्ने डरले पिसाब फेर्न जानसमेत पाइएन ।’ धेरैजसोले लाइनमा बसुन्जेल शौच गर्न साह्रै समस्या भएको गुनासो गरेका थिए ।
अमेरिकी डिभी चिट्ठा खुलेदेखि पासपोर्ट बनाउन आवेदन दिनेहरुको संख्या बढेको राहदानी विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
एकपटक मुसा आएर पूर्ण रूपमा निको भएपछि दोहोरिने सम्भावना कमै हुन्छ ।
Prevह्वात्तै बढ्यो खाना पकाउने ग्यासको मूल्य, प्रतिसिलिन्डर कति ?
पेटमा बो’सो लाग्न थाल्यो ? त्यसो भए यी खानेकुरा खानुस्, पेटमा बो’सो पगाल्नुस् !